Semalt SEO सल्लाह Google मा तपाइँको वेबसाइट पोजीशन गर्न को लागी
पक्कै पनि तपाइँलाई निम्न उखान थाहा छ: अभ्यास सही बनाउँछ। अधिक तपाईं एसईओ मा संलग्न, अधिक अनुकूलन प्रक्रियाहरू तपाईं सिक्न हुनेछ। कहिलेकाँही यी प्रक्रियाहरू यति सरल छन् कि तपाईंलाई लगभग शर्म लाग्छ कि तपाईंले पहिले प्रयोग गर्नुभएको छैन।
के तपाईंलाई थाहा छ म के कुरा गर्दैछु?
जब मैले एसईओको साथ सुरु गरेको थिएँ, यो सबै एब्राकड्राब देखिन्थ्यो। मैले सबै सर्तहरू आउनु भन्दा पहिले सुनेको थिइन। यो पहिलो अवधिमा म Google मा उच्च प्राप्त गर्न टेक्निकल सर्तहरू पढ्न र बुझ्ने कुरामा चिन्तित थिएँ। CTR के हो? कुञ्जी शब्दहरू के हुन्? ब्याकलिks्क के हुन्? 1०१ त्रुटिहरू के हुन्? तपाईंलाई थाहा छ म के कुरा गर्दैछु।
दुर्भाग्यवश, यो पछि बाहिर जान्छ कि तपाईं पनि धेरै मूर्खता पढ्नु पर्छ। कुराहरु जुन बाहिर निस्कन्छन्, सबैमा सत्य हुँदैन, वा पुरानो जानकारी जुन अब कुनै महत्व छैन।
तर कहिलेकाँही तपाईसँग केहि चीजहरू गर्नु पर्दछ खोजी ईन्जिनहरूमा उच्च खोज स्थानहरू प्राप्त गर्न। तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि त्यहाँ important महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरू छन्: आगन्तुकहरू, सन्देश र विश्वसनीयता। अरूले टेक्नोलोजी, सामग्री र प्राधिकरणको बारेमा कुरा गर्छन्। यी चीजहरू अलि समान छन्।
तपाईंको साइटको लागि आगन्तुकहरूको संख्या महत्त्वपूर्ण छ, सीटीआर महत्त्वपूर्ण छ, सीधा ट्राफिक महत्त्वपूर्ण छ। सन्देश खोजीसँग मेल खानुपर्दछ, त्यसैले मनसाय मिल्नुपर्दछ। विश्वसनीयता गुणात्मक लिंकको संख्यामा र तपाईंको वेबसाइटको टेक्नोलोजी, संरचना, आदि जस्ता गुणवत्तामा निर्भर गर्दछ। वास्तवमा, यो टेक्नोलोजी भित्र राम्रो फिट हुनेछ। सबै भन्दा पहिले, तपाईले खोज्नु पर्छ कि कुन कुञ्जी शव्दहरूको लागि तपाई पहिले नै फेला पर्नुभयो।
प्रो टिप गुगल मा प्रगति गर्न
किनभने गुगलमा अवस्थित पृष्ठहरूको साथ उच्च प्राप्त गर्न सजिलो छ!
त्यसोभए तपाईंले कुञ्जी शब्दहरू राख्नुपर्नेछ तपाईंको अवतरण पृष्ठमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा, जहाँ तपाईं चाँडो परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। (यो मुख्य रूपमा द्रुत जीतको लागि हो अधिकतम SEO अप्टिमाइजेसन प्रक्रियाको लागि होईन)। अनलाइन मार्केटिंग, र विशेष गरी एसईओ, लामो अवधिको लागि केहि हो!
यी अझै हामी SEO एसईओ ह्याकहरू पनि होइनौं जुन हामीले भर्खर मात्र कुरा गर्यौं, तर यसलाई केहि बोनस सल्लाहहरू भनिन्छ। यी tips सल्लाहहरूको साथ तपाईं चाँडै राम्रो स्कोर गर्न सक्नुहुनेछ!
एकचोटि तपाईंले आफ्नो शीर्ष कुञ्जी शव्दहरू थाहा पाउनुभयो भने, ती पृष्ठहरू निम्न पृष्ठहरूमा ती कुञ्जीशब्दहरू प्रतिबिम्बित हुन्छन् कि भनेर जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईं एसईओ को लागी नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईं चाँडै नै यहाँ मुनाफा लिन सक्नुहुनेछ। यी परीक्षणहरू देखाउँछन् कि यीहरू अति महत्त्वपूर्ण छन्!
कुञ्जी शब्द फिर्ता गर्न यूआरएल प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, र शब्दहरूका बीच ड्यास - प्रयोग गर्नुहोस्, र कहिल्यै स्पेस प्रयोग नगर्नुहोस्। कहिले पनि एक साथ शब्द नराख्नुहोस्, mijnwebsite.nl/hoewerktgoogle/ जस्तो
वर्डप्रेसमा तपाई यसका लागि एसईओ प्लगइन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै योआस्ट, एसओप्रेस, र्याक मठ आदि।
पृष्ठको H1 हेडरमा
H1 पृष्ठको शीर्षक हो जुन एक आगन्तुकले पृष्ठको शीर्षमा देख्छन्। यस हेडरसँग प्राय: पृष्ठको बाँकी भन्दा ठूलो फन्ट हुन्छ। WordPress मा, H1 प्राय: पृष्ठ शीर्षकको रूपमा स्वचालित रूपमा समान हुन्छ। म सँधै यो छुट्टै सेट गर्न सिफारिस गर्दछु, र तपाईले पृष्ठमा दिनु भएको शिर्षकको नक्कल मात्र नगर्नुहोस्।
यो तपाईंको पृष्ठको सामग्री हो। त्यसोभए त्यो पृष्ठ जुन तपाईंको पृष्ठको अनुच्छेदहरूमा पढ्न सकिन्छ।
तपाईले यि चार ठाउँमा मुख्य कुञ्जी शब्द फिर्ता गर्ने बित्तिकै तपाईले पाउनुहुनेछ कि सकारात्मक नतीजाहरु देखा पर्ने छ। केही व्यक्तिहरूले सकेसम्म सकेसम्म पृष्ठमा कुञ्जी शब्दहरू प्राप्त गर्न कोसिस गर्छन्। यसलाई किवर्ड स्टफिंग भनिन्छ। यद्यपि Google कीवर्ड स्टफिंगको विरुद्धमा छ, यसले कहिलेकाँही काम गर्दछ।
तर अझै १ प्रश्न बाँकी छ: कसरी तपाई यी कुञ्जी शब्दहरू पाउनुहुन्छ?
सुनको महको जारलाई गुगल सर्च कन्सोल भनिन्छ
यदि तपाईं एसईओ को साथ शुरू गर्नुहुन्छ भने, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं जहिले पनि गुगल एनालाइटिक्स खाता सेट अप गरेर तपाईंको वेबसाइटलाई गुगल सर्च कन्सोलसँग लिंक गरेर सुरु गर्नुहोस्।
गुगल खोजी कन्सोलमा तपाईं सबै कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जसको लागि तपाईंको वेबसाइट खोजी परिणामहरूमा देखाइएको छ। यो तपाईको वेबसाइटको साथ गुगलमा उच्च स्कोर गर्न वास्तवमै उपयोगी छ!
तपाइँ केहि क्लिकहरूमा देख्न सक्नुहुनेछ कि कुन कुञ्जी शव्दहरूमा तपाइँको अवतरण पृष्ठहरू फेला पर्‍यो र कुन स्थानमा ती किवर्ड स्कोर।
पृष्ठ जानुहोस् र पृष्ठ १ क्लिक गर्नुहोस्
त्यसोभए खोजीहरूमा जानुहोस्: यहाँ सबै खोजी सर्तहरू छन् जसको लागि तपाईंको पृष्ठ देखाइएको छ। प्रभावहरूको संख्या खोजी भोल्युमसँग मेल खान्छ जबसम्म तपाईं गुगलमा पहिलो पृष्ठमा हुनुहुन्छ।
यहाँ तपाईं सबै कुञ्जी शब्दहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन गुगलले तपाईंको पृष्ठ प्रासंगिक थियो भनेर घोषित गरे पछि प्रयोग भएको थियो।
तपाईको एसईओ कार्यको अतिरिक्त, तपाई गुगल विज्ञापन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ (पहिले गुगल विज्ञापन शब्दहरू), ताकि तपाई धेरै सान्दर्भिक कुञ्जी शव्दहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। केवल नकारात्मक पक्ष, अवश्य पनि, लागतहरू संलग्न छन्। तपाइँ १ महिनाको लागि विज्ञापनहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुञ्जी शब्द छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं त्यो पृष्ठको लागि उच्च फेला पार्न सक्नुहुन्छ। हालसालैका पोष्टहरूमा कम कुञ्जी शव्दहरू हुनसक्दछ जुन समयको साथ बढ्दछ। खोज इन्जिनको मार्केटिंग अधिक डाटाको साथ राम्रो काम गर्दछ!
यी सुझावहरूको साथ तपाईं सयौं डलर लगानी नगरी Google मा उच्च प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ?
यस लेखको बाँकीमा तपाईंसँग गुगलमा राम्रो स्कोर प्राप्त गर्न सबै सल्लाहहरू छन्।
१. वेबसाइट क्विक्सस्कैन
यो बालुवा मा घर बनाउन स्मार्ट हुनेछ? यस प्रसिद्ध बाइबलीय भनाइको यसमा धेरै सत्य छ। यदि तपाईं गुगलमा राम्रो स्थान प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले राम्रो आधारको साथ सुरू गर्नुपर्नेछ। तपाईं एक वेबसाइटमा डूबने जहाजको रूपमा चुपचापको रूपमा निर्माण गर्न सक्नुहुन्न।
धेरै पार्टीहरू जसले एसईओ प्रस्ताव गर्दछ यो चरण छोड्छन् र तुरून्त नयाँ सामग्री थप्न सुरू गर्दछ।
के तपाइँ आफ्नो प्रतिस्पर्धा भन्दा अगाडि एक कदम हुन चाहानुहुन्छ?
त्यसो भए पहिले तपाइँ तपाइँको वेबसाइटमा समस्याहरू समाधान गर्न सुरू गर्नुहोस्। एक एसईओ क्विक्स्कनको साथ, वा म यसलाई कल गर्न रुचाउँछु, एसईओ विश्लेषण, किनभने यो 'छिटो' होइन। तपाईं आफ्नो साइटमा समस्याहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन नकारात्मक फेला पार्ने प्रभावलाई असर गर्न सक्दछ।
यहाँ most सब भन्दा साधारण समस्याहरू छन् जुन मैले सामना गरें। यदि तपाईंसँग यो क्रमबद्ध छ भने, तपाईंसँग प्रतिस्पर्धाको5चरण अगाडि नै छ।
जाँच गर्नुहोस् कि त्यहाँ गल्तिले कुनै पृष्ठहरू छैनन्, नो-इन्डेक्स स्ट्यान्ड।
तपाईले खोजशब्द क्यानिबलाइजेशनबाट दु: खी हुनुभएको छैन भनेर अनुसन्धान गर्नुहोस्।
जाँच गर्नुहोस् यदि त्यहाँ तपाईंको साइटमा 4० if त्रुटिहरू छन् (र यदि पृष्ठहरूमा ब्याकलिks्कहरू छन् जुन अब अवस्थित छैन)।
तपाईंको वेबसाइट मोबाइलमा राम्रोसँग काम गर्नुपर्दछ, विशेष गरी गति!
एक SSL प्रमाणपत्र छ, र हेर्नुहोस् यदि तपाइँका सबै पृष्ठहरू HTTP बाट HTTPS मा पुन: निर्देशित छन् भने।
२. गुगलमा द्रुत उच्च पदहरूको लागि अन-पेज एसईओको साथ द्रुत जीत
तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने सब भन्दा छिटो नाफा पृष्ठहरु लाई अनुकूलित गर्नु हो जुन तपाईको वेबसाइटमा लामो समय देखि आएको थियो तर राम्रोसँग स्कोर गर्दैन।
गुगल खोजी कन्सोलमा जाँच गर्नुहोस् कुन पृष्ठ र कीवर्डको लागि तपाइँ औसतमा 7-१० श्रेणीकरण गर्नुहुन्छ।
पहिलो पृष्ठको तल पृष्ठहरूको अप्टिमाइजेसनले चाँडै बढी आगन्तुकहरूलाई निम्त्याउन सक्छ। त्यसोभए पृष्ठहरू खोज्नुहोस् जसको लागि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुञ्जी शब्द उच्च छैन। नयाँ पृष्ठको साथ यो पृष्ठ अप्टिमाइज गर्नुहोस्।
PageOptimizer Pro वा SurferSEO को नि: शुल्क संस्करण प्रयोग गर्नुहोस् तपाई कसरी त्यो किवर्डलाई द्रुत रूपमा स्कोर गर्न सक्नुहुनेछ भनेर हेर्नका लागि सब भन्दा बलियो एसईओ सals्केतहरू: H1, H2, शीर्षक, मुख्य पाठ आदि।
यी २ ऑन-पृष्ठ SEO सुझावहरूको साथ तपाईले आफ्नो एसईओ मार्केटिंगमा सब भन्दा छिटो नाफा देख्न सक्नुहुन्छ!
Better. राम्रो खोजको लागि प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरू, वाक्यांशहरू र LSI खोजशब्दहरू थप्नुहोस्
यदि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं केको लागि श्रेणीकरण गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं सजीलै गुगलमा उच्च फेला पार्न सक्नुहुनेछ र केहि युक्तिहरूको साथ धेरै कुञ्जी शब्दहरूका लागि माथि जान सक्नुहुन्छ। विशेष गरी जब तपाईले महत्वपूर्ण कुञ्जी शब्दका लागि राम्रो दर्जा पाउनुहुन्छ, गुगलले स्वचालित रूपमा तपाईको पृष्ठ बहुविध कुञ्जी शब्दहरूसँग सम्बद्ध गर्दछ। यो केस हैन यदि तपाईं खराब स्कोर!
के प्रासंगिक र अर्थ खोजशब्द को बारे मा महत्वपूर्ण यी शब्दहरु बीच खोज ईन्जिन संग प्रासंगिकता मात्र हो। तपाइँ यहाँ पर्यायवाचकहरू सोच्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले केहि अलि बढी हेर्नु पर्छ। तपाईंले बारमा छिमेकीहरूलाई हेर्नु पर्छ।
उनीहरूको पृष्ठमा के शब्दहरू प्रयोग गर्छन्? कुन शब्दहरू धेरै प्रतिस्पर्धीहरु संग हुन्छ?
यदि तपाईंलाई ठ्याक्कै थाहा छैन भने यी के हुन्, तपाईं सर्फर एसईओमा नि: शुल्क खाता पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंको किवर्डमा विश्लेषण गरिएको हुन्छ। ग्राफ मुनि तपाइँले समान कुञ्जी शब्दहरूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यहाँ तपाइँले सबै प्रकारका कुञ्जीशब्दहरूको सूची पाउनुहुनेछ जुन तपाइँको कुञ्जी शब्दसँग सान्दर्भिक छ। यो बढि प्रासंगिक हुन र गुगलमा उच्च माथि बढ्नको लागि सुरूवात हो।
तपाईं यी सामग्रीहरू तपाईंको सामग्रीमा थप्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईं यसलाई हेडरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हेडरसँग तपाईंको पृष्ठको सामग्रीको शब्द भन्दा शब्दशब्दको लागि धेरै शक्तिशाली संकेत हुन्छ। हेडरहरूको अप्टिमाइजेसन Google मा उच्च प्राप्त गर्न सब भन्दा छिटो तरीका हो।
LSI कुञ्जी शब्दहरू ती शव्द हुन् जुन स्वचालित रूपमा शीर्षकको बारेमा कुराकानीमा आउँदछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाई कुनै खास प्रकारको कारको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले पेट्रोल, निकास, रिम्स जस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुहुनेछ। यी शब्दहरू समानार्थी शब्द होइनन्, तर खोज ईन्जिनको लागि पाठ के हो भनेर बुझ्न महत्वपूर्ण हुन्छ। तपाईको खोजीको लागि यी लाभहरू।
अतिरिक्त प्रो टिप
विकिपेडियामा तपाईंको शीर्षकमा एक पृष्ठ छ; पाठमा प्रदान गरिएका लिंकहरू जाँच गर्नुहोस्। तलको उदाहरण खोज इञ्जिन अनुकूलनको बारेमा छ। यदि तपाईं गुगलमा उच्च प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, यी शब्दहरू थप्नका लागि हुन्।
तपाई देख्न सक्नुहुनेछ कि विषय एसईओ हो, र धेरै शब्दहरूको एक अलग लिंक छ। यी विषयहरू SEO मा 'जडित' छन् र यसैले प्रासंगिक/अर्थपूर्ण छन्।
शब्दहरू हेर्नुहोस्: दृश्यता, वेबसाइट ट्राफिक, वेब पृष्ठ, वेबसाइट, ब्याकलिks्कहरू आदि। यी शब्दहरू तपाईंको पाठमा खोजी ईन्जिनलाई तपाईंको सामग्री अझ राम्ररी बुझ्न र गुगलमा उच्च श्रेणीकरण बुझ्न मद्दतको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। अन्तमा, तपाई उच्च स्कोर गर्न गुगल प्रवृत्ति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
The. धेरै तरिकाले क्वेरीको उत्तरमा ध्यान दिनुहोस्!
एक प्रो टिप जुन म तिमीलाई यहाँ दिन जाँदैछु एक हो जुन मलाई दिईंदैन।
सर्वप्रथम तपाईले त्यो किवर्डको लागि सँधै गुगल खोजी गर्नु पर्दछ र कुन प्रकारको खोजी परिणामहरू देखाइएको छ हेर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, एक युट्यूब भिडियो, छवि, चित्रित स्निपेट आदि को लागी सोच्नुहोस् तपाईले के गर्नु पर्छ निम्न छ: ती चीजहरूमा ध्यान दिनुहोस् र यसको प्रतिलिपि गर्ने प्रयास गर्नुहोस्!
छविहरूको लागि एसईओ
यदि छवि खोजी परिणामहरूमा प्रदर्शित हुन्छन् भने, छविहरूको एसईओ (छवि एसईओ) मा केन्द्रित रहनुहोस्।
छविको फाईल नाम अप्टिमाइज गर्नुहोस्। त्यसोभए img019.jpg को सट्टामा तपाई यसलाई अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ: सर्च इंजन। Jpg।
एक पहिचान योग्य फोटो को उपयोग गर्नुहोस्। परीक्षणहरूले देखाउँदछ कि एक छवि को सामग्री पृष्ठ को खोजने को प्रभावित गर्दछ। त्यसोभए यदि तपाईं फोर्ड मुस्टangको छवि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, खोजी ईन्जिनले सजिलै पहिचान गर्न सक्ने एउटा प्रयोग गर्नुहोस्। यो गुगल मा तपाईंको वेबसाइट उच्च प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
शीर्षकको चारै तिर तपाईंको पृष्ठमा छवि थप्नुहोस्। यदि तपाइँको पृष्ठ धेरै वर्गहरु मा विभाजित छ, र सेक्शनहरु को एक टेस्ला को बारे मा छ। त्यसपछि त्यहाँ टेस्लाको छवि थप्नुहोस्।
स्पष्ट र वर्णनात्मक छवि Alt प्रयोग गर्नुहोस्। यो छविको लागि वैकल्पिक पाठ हो। यो स्क्रिन रिडरहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ, अन्धा मान्छेहरूका लागि। तर एक छवि Alt पनि एक र्याकिंग कारक हो। राम्रोसँग परिभाषित छवि अल्ट भएकोले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
थप सल्लाह: छविमा तपाईंको वेबसाइटलाई वाटरमार्कको साथ प्रकृया गर्न यो उपयोगी हुन सक्छ। जतिसक्दो चाँडो व्यक्तिहरूले खोजी गर्दछन्, तपाईंको छवि अरू भन्दा बढी देखिन सक्छ, र तपाईं एक क्लिक को राम्रो मौका छ।
केही खोजीहरूको साथ तपाईले खोज परिणामहरूको शीर्षमा हाईलाइट गरिएको पाठको टुक्रा देख्नुहुनेछ, यसको छेउमा रहेको छवि सहित। यो छवि प्राय: अर्को वेबसाइटबाट देखाईन्छ। त्यसैले यदि तपाईंले आफ्नो छविहरू अप्टिमाइज गर्नुभयो भने, तपाईं त्यहाँ फिचर हुन मौका छ।
जे होस्, त्यस्ता पाठको भागलाई फिचर स्निपेट भनिन्छ।
एक विशेष स्निपेट माथि लिन सधैं सजिलो हुँदैन। यो पृष्ठमा पूर्ण निर्भर गर्दछ जुनबाट अब यो पुनः प्राप्त गरियो। तर यहाँ फिचर गरिएको स्निपेट अपनाउने केहि सुझावहरू छन्:
त्यसोभए तपाईंले पृष्ठ भ्रमण गर्नुपर्नेछ जुन अब एक विशेष स्निपेटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। पृष्ठमा फिचर स्निपेट सामग्री कहाँ देखाइएको छ हेर्नुहोस्।
धेरै केसहरूमा कुञ्जी शब्द हेडरमा देखा पर्नेछ।
त्यसोभए तपाईको टेक्स्टमा 40०-50० शब्दहरूको एकल अनुच्छेदको साथ खोजीलाई उत्तर दिन प्रयास गर्नुहोस्। यो उत्तर अर्थपूर्ण र सान्दर्भिक शब्दहरूले भर्नुहोस्।
एक अतिरिक्त प्रो टिप
खोजी परिणाममा कुन शब्दहरू साहसी छन् हेर्नुहोस् र ती शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्! यसलाई गोप्य राख्नुहोस् ताकि तपाईं प्रतिस्पर्धाको अगाडि रहनुहोस्।
तपाईं नियमित रूपमा YouTube भिडियोहरू देख्नुहुनेछ जैविक खोज परिणामहरूमा माथि देखा पर्दै। यसले तपाइँलाई तपाइँको भिडियोको साथ यो भिडियो बदल्नको लागि अवसर दिन्छ।
तर तपाईं कसरी त्यसो गर्नुहुन्छ?
यहाँ यो कसरी गर्ने बारे केही सुझावहरू छन्।
यदि कुनै YouTube भिडियोहरू पृष्ठ १ मा दृश्यात्मक छन् भने, कृपया पृष्ठहरू २--5 जाँच गर्नुहोस् यदि त्यहाँ कुनै छ भने। यदि त्यसो हो भने चिन्ता नगर्नुहोस् तर फरक कुञ्जी शब्दमा फोकस गर्नुहोस्। यदि एक भिडियो वा धेरै भिडियोहरू देखिन सकिन्छ भने, तपाईंले युट्यूबमा भिडियो पनि हेर्नु पर्छ।
कुन शीर्षकले यो प्रयोग गर्दछ?
कुन वर्णन प्रयोग गरिएको छ?
भिडियो वेबसाइटमा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
भिडियोले के खोजशब्द प्रयोग गर्दछ?
त्यसो भए अब हामी यस लेखको अन्तमा छौं। त्यसोभए तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि पहिलो गुगल परिणाममा तपाईको साइट माथि ल्याउनु तपाईको लागि अब रहस्य छैन। तपाईले गर्नु पर्ने सबै लेखमा पहिल्यै उल्लेख गरिएको छ। गुगलका लागि तपाईंको वेबसाइट अप गर्न केवल यी उपयोगी सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्।